Actualidad iPhone မှာမင်းတို့ပြမယ် အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အဲဒါကို Apple ဖုန်းအတွက်လုပ်ထားတာပါ။ အပတ်တိုင်း iPhone ကိုအဖုအပိန့်များနှင့်ခြစ်ခြင်းများမှကာကွယ်ရန်အဖုံးအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ စပီကာ သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်း၊ အိမ် (သို့) ကားရပ်နားရာနေရာကိုနားဆင်နိုင်ပြီးနားဆင်နိုင်သည့်နေရာ၊ ကားအားသွင်းစက်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ်အိုင်ဖုန်းမှထိန်းချုပ်နိုင်သောကစားစရာများ။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးဆောင်ခဲ့ရမည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပေါ်ကမ်းလှမ်းမှု မင်းဝယ်ဖို့ ကြိုးကြိုးမဲ့အားသွင်း နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအခြားထုတ်ကုန်
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
HomyHub၊ သင့်ကားဂိုဒေါင်ကို သင့်မိုဘိုင်းဖြင့် မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ HomyHub ကားဂိုဒေါင်အတွက် အလိုအလျောက်အဖွင့်စနစ်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး မည်သည့်အလိုအလျောက်တံခါးနှင့်မဆို သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သော...
အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း AirPods Pro2သည် တူညီသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
AirPods များသည် နည်းပညာပိုင်းအရ Apple ၏ နောက်ဆုံးပြောင်မြောက်သော တော်လှန်ရေးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နားကြပ်ပါရှိသော...
သင်၏ AirPods Max အတွက် Satechi အားသွင်းစက်နှင့် အထိုင်
သင့် iPhone အတွက် MagSafe အားသွင်းအခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည့် AirPods Max အတွက် Satechi mount ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်...
FCC တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသစ်တစ်ခုသည် iOS အတွက် ဖြစ်နိုင်သော ကွန်ရက်အဒက်တာတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြသည်။
လာမယ့် iPhone နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောလဟာလတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် Apple က သူ့ရဲ့ Devices တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းလည်း ပါပါတယ်။
AirPods Pro2သည် Lightning ချိတ်ဆက်ကိရိယာဖြင့် ယခု 2022 တွင်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
Ming Chi Kuo ၏ ခန့်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံပါက ယခုနှစ်တွင် AirPods Pro မော်ဒယ်အသစ်ကို ရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Twinkly Flex၊ သင့်စိတ်ကြိုက် နီယွန်မီးများနှင့် HomeKit တို့ဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Twinkly ၏ Flex စမတ်မီးလုံးအသစ်များကို နီယွန်မီးများ၏အသွင်အပြင်ဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်...
USB-C- ချိတ်ဆက်ကိရိယာပြောင်းလဲမှုသည် ထုတ်ကုန်အားလုံးသို့ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အကုန်မှာ Bloomberg က သုံးသပ်သူ Ming-Chi နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ ဒီပို့စ်မှာ ပြောထားပါတယ်...
Sonos Sub Mini Leaks အသစ်များ၊ Sonos ၏ Next Budget Subwoofer
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Sonos သည် Apple ၏ စပီကာများဖြစ်ပြီး၊ ချိတ်ဆက်ထားသော စပီကာများတွင် အထူးပြုထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး...
Nomad Base One Max- အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး၊ အမြင့်ဆုံးပါဝါ
အင်္ဂါရပ်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးများအတွက် ယခုရှာဖွေနိုင်သည့် ပရီမီယံ အားသွင်းအခြေခံကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
iOS တွင်တရား ၀ င်မဟုတ်သောကေဘယ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်
All for Controllers, iOS ပေါ်တွင်သင်၏ console ၏ remote ကိုအသုံးပြုပါ